जब धर्म सकीन्छ तब मानिसको अस्तित्व पनी सकिन्छ: साध्वी पद्माश्री किङ्करी - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज संवाददाता प्रकाशित मिति: August 31, 2020
यहाँ पनि भएको यहि नै हो, जबजब हामी कमजोर बन्यौ , जबजब हामी स्वार्थि बन्दै गयौ , जबजब हामी लोभी हुदै गयौ , जबजब हामी कायर बन्दै गयौ , तब तब विश्वले हाम्रो फाइदा उठाउदै गयो । हामी डलर मा बिक्दै गयौ । हाम्रा नदिनाला बेचिए , हाम्रा भेषभुषा लुटिए , हाम्रा संस्कृति, रितिरिवाज , रहनसहन , नासिए । हाम्रि जननीलाइ, हाम्रो धर्मलाई , हाम्रो सनातनि पहिचानलाई सबैतिर बाट लुट्दा लुट्दा जर्जर पारेको अवस्थामा बेचिन लागिदैछ अब जसरी एउटी गाईलाई दुध दिउन्जेल पालिन्छ त्यसपछि लगेर बेचिन्छ । हो त्यही अवस्था आउनै लागिसकेको छ । ,तर हामी पनि त्यति कमोजोर त कहा छौ र ? शरीरमा एक बुन्द रगत र दुइ घुटकी सास रहेसम्म धर्मबाट च्युत हुने छैनौ र त्यही धर्ममा टेकेर हिन्दु हिन्दुत्व र मातृभूमि को रक्षार्थ डटिरहने छौ।
त्यसैले म भन्छु …हरेक संस्था मजबुत होस , सन्त समाज मजबुत होस , राजनीति पनि मजबुत होस , धर्मनीति पनि मजबुत होस । यो देशै बिग्रिए लालसा, इच्छा, कामनाको के गति ? यो देश भोकै मरे धनवानको के गति ? यो देशमा अत्यचारले सिमा नाघे बलवानको के गति ? यो देशमा अन्धकार फैलिए विद्वानको के गति ? सामर्थलाइ नै निभाइदिए आज्ञाकाे के गति ? जव धर्म नै नरहे मानवताको के गति ? त्यसैले पार्टीको बन्नु अघि , सम्प्रदायको बन्नु अघि , जातियताको बन्नु अघि ,प्रदेशको बन्नु अघि, क्षेत्रको बन्नु अघि धर्ममा रहेर नेपाली बनौ।
अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक खुल्यो